Mayelana NATHI - Higee Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
I-HIGEE MACHINERY ineminyaka engaphezu kwengu-15 yesipiliyoni sobuchwepheshe.
IHIGEE MACHINERY isebenza ekwakhiweni nasekukhiqizeni imigqa yemishini yokugcwalisa i-Capping and Labeling emikhakheni eyahlukahlukene ikakhulukazi ezimbonini zamanzi, iziphuzo neziphuzo. Vele futhi hlinzeka ngemishini yezimboni zokudla, ezemithi, zezimonyo nezamakhemikhali.
Imishini yethu ithunyelwe emazweni angaphezu kwekhulu emhlabeni wonke. Sinethuba lokwenza isisombululo esihle kakhulu ukuhlangabezana nezidingo ezithile zamakhasimende futhi sigxile kwikhwalithi enhle nasensizakalweni yokwakha nokugcina ubudlelwane bebhizinisi besikhathi eside namakhasimende emhlabeni jikelele.
Sibe nesizinda esihle kakhulu ekusebenzeni namakhasimende aqhamuka emazweni ahlukahlukene ezinkambeni ezahlukahlukene iminyaka eminingi futhi sinikezela ngemisebenzi enwetshiwe. Sikholelwa ukuthi ukubambisana kwethu okuhle kuzoletha imiphumela emangalisayo kithi sobabili.
Sitshale imali futhi sabelana ngamafektri ayisithupha eChina. Amakhasimende amaningi amukelekile ukuxhumana nathi. Ngokuqinisekile sizokwakha ubudlelwano obuhle namakhasimende ngensizakalo yethu enhle nangesimo sengqondo sobuchwepheshe.
Imikhiqizo yethu Eyinhloko Ibanga:
1.Monoblock Water and Beeverage Filling Capping Labeling and Packing line ephelele
I-2.Linear Liquid Filling Line yezimboni ezahlukahlukene
Zonke izinhlobo ze-Labeling machine
Ukupakisha umshini (oketshezi, i-powder, i-granule, unamathisela njll.)
5.Bottle ohlabayo umshini
6.Imishini yokwelashwa kwamanzi
7.Isiphuzo sangaphambi kokwelapha uhlelo